GreenKhabar – इन्धन नभएमा मात्रै साइकलप्रति आकर्षण !
इन्धन नभएमा मात्रै साइकलप्रति आकर्षण !
in फिचर / हरित उद्यम / हरित खबर — by GreenKhabar —	January 29, 2016
इन्धन अभाव हुँदा बढेको साइकलप्रतिको आकर्षण दिगो हुन सकेन। कालोबजारीमै तेल उपलव्ध भएसम्म पनि मानिसको आकर्षण साइकलप्रति घटेको पाइएको छ। नाकाबन्दी र इन्धन अभावका कारण फस्टाएको साइकल व्यवसायमा पुनः कमी आएको छ। नाकाहरु खुकुलो हुन थालेपछि र कालोबजारीमै भएपनि इन्धन आपूर्ति हुन थालेपछि साइकल व्यापारमा कमी आउन थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
‘नाकाबन्दी र इन्धन अभाव भएको बेला साइकलको व्यापार निकै बढेको थियो,’ नेपाल माउन्टेन बाइकका रन्जन राजभण्डारीले भने, ‘तर अहिले व्यापारमा फेरि कम भएको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने साइकलको माग नै छैन। इन्धन नभएका बेला सबै मानिसहरु साइकल किन्न निकै उत्साहित थिए। तर सहज हुनासाथ फेरि उही ताल भएको छ।’
इन्धन अभाव हुँदा सबैको चासोमा परेको साइकल अहिले फेरि ओझेलमा परेको छ। अभावका समयमा निकै भिडभाड हुने राजधानीका साइकल पसलमा अहिले फाटफुट मात्र मानिसहरु आउँछन्। कुनै समयमा भ्याइ नभ्याइ हुने साइकल व्यापारी अहिले खाली बस्न बाध्य छन्।
‘अहिले मानिसहरुको साइकलतर्फ आकर्षण घटेको छ। इन्धन सहज हुनासाथ मानिसले मोटरसाइकललाई नै प्रथमिकता दिन थालेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘अभावका समयमा हरेक मानिसले साइकल तर्फ यति रुची देखाएका की बजारमा भने जस्तो साइकल पाउन पनि मुस्किल थियो। तर त्यो रुची अब हराइसकेको छ। मानिसहरु पसलमा आउँछन् र साइकल हेर्छन्, जान्छन्। जसलाई जरुरत छ उनीहरुले भने किन्छन््। यसलाई दिगोरुपमा प्रयोग गर्ने सोच भएकाहरु एकदम कम छन्। त्यसैले पनि यस्तो अवस्था आएको हो।’
नाकाबन्दीको चरम समयमा समान्य मूल्यका साइकल धेरै विक्री हुने गरेको भएपनि हाल भने पहिलेजस्तै १५ हजार देखि ३० हजार रुपैयाँसम्मका विक्री हुने गरेको भण्डारीले बताए।
‘अहिले व्यापार शून्य छ भन्दा कुनै फरक पर्दैन’, एमटिभी साइकल्स ठमेलका उपेन्द्र खड्काले भने, ‘त्यति बेला इन्धन पाइएको थिएन सबैको चासो साइकलमा थिया बाटोमा साइकल धेरै देखिन्थे तर अहिले पहिलेकै जस्तो मोटरसाइकल र गाडी मात्र देखिन्छन्।’
‘भूकम्प अघि व्यापार निकै राम्रो थियो’ खड्काले भने, ‘भूकम्पले थला परेको व्यवसाय अलि उक्सिदै थियो तर अहिले भने फेरि व्यापारमा कमी आएको छ। यसोभन्दा अभाव भइरहोस् भन्ने होइन तर मानिसमा साइकलको बारेमा अझै चेतना आइसकेको छैन भन्ने हो। साइकल सधैँ नै उपयोगी हुन्छ भन्ने ग्राहकले बुझुन् भन्ने हाम्रो सोच हो।’
‘सस्तो मूल्यका साइकलको माग पनि धेरै थियो र किन्ने मानिसहरु पनि धेरै आउँथे,’ बाइक स्टेशन पानीपोखरीका प्रयास राज तामाङले भने, ‘तर अहिले व्यवसायमा कम भएको छ। सस्ता मूल्यका साइकलको माग निकै घटेको छ। हामी विशेषगरी महंगा खालका प्रोफेशनल साइकलको व्यापार गर्ने भएकाले यस्ता महंगाको व्यापारमा कुनै फरक देखिएको छैन। तर सस्तो मूल्य पर्नेको भने माग उच्च थियो जुन अहिले शून्य छ।’
नाकाबन्दी र इन्धन अभावका बेला ह्वात्तै बढेको साइकल व्यापारमा कम भएपछि व्यवसायीहरु केही निरास र चिन्तित देखिएका छन्। साइकललाई विकल्पका रुपमा मात्र प्रयोग नगरेर दिर्घकालीन रुपमा प्रयोग गर्ने सुझाव व्यवसायीहरु दिन्छन्। साइकलको प्रयोगले स्वस्थ्यलाई फाइदा गर्ने र जस्तो सुकै चरम इन्धन अभावमा पनि काम दिने हुनाले यसबारे सबैले बुझुन् भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ।